Maitiro ekushandura iyo Rarama Mapikicha eako iPhone 6s kuita GIF | IPhone nhau
Maitiro ekushandura yako iPhone 6s Mhenyu Mapikicha kuita animated GIF
Apple yakaunza Rarama Mapikicha seimwe yezvinhu zvitsva zvei iPhone 6s uye iPhone 6s Plus. Izvo zvinogona kutaridzika kunge zvinokwezva zveiyo iPhones nyowani zvinogona zvakare kuve kusuwa kukuru kana zvasvika pakugovana, zvirinani kudzamara makuru masocial network anosanganisira kutsigira kweApple "mhenyu mafoto." Kunyangwe pavanodaro, pachave nenguva zhinji apo isu tinoda kuvagovana navo pane rimwe basa risingatsigirwe. Zvakanakisa mune izvo zviitiko ndezvekuti gadzira GIF kubva kuRarama Photo uye ndizvo zvatiri kuzokudzidzisa mune ino chinyorwa.
1 Maitiro ekushandura Mapikicha ehupenyu kuva GIF yehupenyu
1.1 Ndiine Image Capture + Vhidhiyo kuGIF
Maitiro ekushandura Mapikicha ehupenyu kuva GIF yehupenyu
Munguva pfupi pachave nezvakawanda zvinoshandiswa muApp Store izvo zvichakwanisa kushandura mapikicha eApple kuita GIF, asi kwechinguvana, chinhu chakanyanya kugadzikana kuzviita nekombuta. Kufamba kwebasa hakutsigirwe parizvino, asi ingangove iri mune isiri kure ramangwana.
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Ini ndinowedzera Anwendung anotozviita.
Ndiine Image Capture + Vhidhiyo kuGIF
Isu tinobatanidza yedu iPhone, iPod kana iPad kune komputa yedu netambo yeMheni.
Isu tinovhura Image Capture.
Tichaona kuti pane maviri ane zita rimwe chete. Isu tinosarudza iyo .MOV faira uye tozvvuzvurudza kudesktop.
Isu tinovhura yedu yatinofarira browser uye tiende pawebhu Vhidhiyo kuna GIF. Pakutanga ndaida kukurudzira iyo webhu cloudconvert.com, asi iyo GIF inotigadzira pawebhu iyoyo inorema kwazvo. Pawebhusaiti ino isu tinongofanirwa kudhonza vhidhiyo yedu kuwindo yandakamaka yakatsvuka mumufananidzo unotevera.
Kana iko kutendeuka kwapera, ingotinya Download.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekushandura yako iPhone 6s Mhenyu Mapikicha kuita animated GIF
Izwi, Excel uye Power Point yeIOS inogadziridzwa nezvitsva zvitsva.
WhatsApp yakagadziridzwa ichitsigira 3D Kubata uye nekukurumidza mhinduro